Ngingayivula kanjani i-Akhawunti Yebhizinisi lePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kujwayelekile ukuthi abantu bafune ukuba ne-akhawunti yabo yePinterest ukuze banikeze umuzwa ongcono kukho konke abakwenzayo ngaphakathi kwepulatifomu. Lokho wukuthi, ukuthatha imibono yokuhlobisa noma nokwazisa amaphrojekthi akho ngawodwana njengendlela yokuxhumana.
Kodwa-ke, izinkampani ezinkulu nazo zinethuba loku dala ikhasi lakho ku-Pinterest lokho kunikeza inzuzo enkulu embonweni wokuxhuma nabasebenzisi. Konke kuzosala ezandleni zalabo abaphethe ingxenye yokukhangisa yenkampani noma ngisho nomuntu ophethe amanethiwekhi.
Uma inkampani ifuna ukuhlanganisa izinkampani eziningi, khona-ke zingakhiwa ngemibono eqondile yokuthola inzuzo ethe xaxa. Ukusuka lapho bangabuka kuqala ukuthi bafuna ini futhi sesha abasebenzisi noma abathengi futhi uthole abathengi abangaba khona bemikhiqizo noma izinsizakalo.
Izinyathelo zokuvula i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest
Njengawo wonke amakhasi, I-Pinterest idale isigaba esinikezelwe ezinkampanini okunikeza lezi zindawo ithuba lokuzakhela ezazo imibono yokukhangisa endaweni yesikhulumi. Ngaphandle kokungabaza, kungumbono omuhle onikeza abantu amandla okufika kumikhiqizo yangempela ngokuchofoza inkinobho.
I-Pinterest ithuthukise ikhono layo lokuxhuma abantu ngaphandle kokuthatha izinyathelo eziningi ekhasini. Kepha empeleni, konke kuzoya ngokuthi inkampani ngayinye iyithatha kanjani inkambo yayo zokuxhumana.
Ungayivula kanjani i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest?
Vala ukungena ngemvume kwe-akhawunti yomuntu siqu
Sesha: "Iseshini yama-akhawunti webhizinisi ku-Pinterest"
Beka idatha eceliwe ngaphakathi kwepulatifomu
Ungakhohlwa ukwengeza: iwebhusayithi yakho ukudala isixhumanisi, izwe lapho inkampani itholakala khona, ulimi lokuxhumana endaweni yesikhulumi.
Ngemuva kwalokho kufanele wamukele imibandela bese uqhafaza ekhasini elilandelayo ekhasini
Gxila ebhizinisini lakho endaweni eyodwa futhi kufanele ulinikeze ukwamukela
Ungabeka uma ufuna ukukhuthaza imikhiqizo noma izinsizakalo
Ekugcineni ungakha iphini noma umane uqondise kabusha ku-akhawunti yebhizinisi
Enye yezinto ezokusiza ukuthi uhlangane nekhasi uqobo yikhono lokuxhumana nomphakathi ngokwakha izikhonkwane. Lezi ngokungangabazeki zibe ngezinye zezinto ezifushanisa ibanga kulokho okufunwa ngumphakathi.
Kungani i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest ibalulekile?
Ukwenza ikhasi lePinterest libe ngcono, kudingekile kakhulu ukuthi kube nokuqinisekiswa kwezinkampani. Lokhu ngokungangabazeki kunciphisa ukubakhona kwemikhonyovu ngaphakathi kwewebhu futhi ngaleyo ndlela kuveze imininingwane ethile.
Namuhla, amakhasi angenza ukushicilelwa kwawo kuhlanganise ukukhushulwa ukufinyelela kwezinye izigaba. Noma kunjalo, zonke lezi zinyathelo zidinga ukwenziwa ngendlela efanele futhi ngokuqinisekile ngomugqa wesihloko ocacisiwe.
Njengoba kunikezwe konke lokhu, ukudala i-akhawunti ye-Pinterest kungakhipha okuhle kunakho konke isici sokuxhumana ukuthola ukufinyelela okuthe xaxa emakethe, noma ngabe izethameli.
1 Izinyathelo zokuvula i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest
1.1 Ungayivula kanjani i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest?
2 Kungani i-akhawunti yebhizinisi ku-Pinterest ibalulekile?